Basilisk nataon'i Jon Bilbao - Ikkaro
firosoana >> Lohahevitra hafa >> Basilisk nataon'i Jon Bilbao
Tena tiako ny eritreritra kely ratsy izay ananan'ilay toetra, indrindra amin'ny fifandraisany amin'ny mpiara-miasa aminy. Tena tiako ny fivoaran'ny toe-tsaina rehetra an'ny mpanoratra, ny mpanoratra.
Injeniera iray izay mahafoy ny asany mba hiaina ny fiainany sy manoratra dia manao dia lavitra miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy any Etazonia izay hilazan'izy ireo aminy ny tantaran'i John Dunbar fa izy no hitantana ny fanoratana.
Misy teti-dratsy 2 samy hafa tsara, dia ny an'ny mpanoratra sy ny fiainany ary ny tantara izay notantarain'izy ireo taminy momba an'i John Dunbar sy ny fitsangatsanganana arkeolojika tany Wild West, hitadiavana ireo taolana dinôzôro goavambe izay nahasarika ny olona tamin'ny androny. Tsy azoko hoe biby inona izy ireo. Ity no faritra Tandrefana amin'ny tantara.
Raha tianao ny tapany Andrefana, dia mora ho anao ny mankafy ireo tantara novakiana rehetra tao Frontera, misy fanangonana tena tsara, Valdemar Frontera Collection ary ao amin'ny bilaogy niresaka momba izany Crazy Horse sy Custer ary Comanche
Ny fahatsapana tsy fahombiazantsika, ary diso ny hevitra raisintsika, ary ny ady hevitra eo amin'ny fahatsapana ho meloka sy henatra ... satria olombelona isika. Ka andramo ny mahatadidy zavatra tokana. Tsy anao izany.
Ny fahitana ny Ny sisa tavela amin'ny dinôzôro goavambe any Etazonia, nampirongatra ny traikefa nahafinaritra sy fisainana tamin'izany fotoana izany.
Heveriko fa be dia be ny boky misy ny fifandraisan'izy ireo amin'ity lohahevitra ity fa satria iray monja no namakiako azy dia nampatsiahy ahy izany tsy amin'antony izy. Sambany aho nahita an'io tao Oeste avy any Carys Davies, izay tantsaha iray nanao dia an-tsehatra mba hitady ireo biby lehibe izay manana ny taolana nolazain'ny mpikaroka. Mandao ny zava-drehetra sy ny faritra atsinanan'i Pennsylvania izy hitady azy ireo.
Etsy ankilany, ny ampahany hafahafa indrindra amin'ilay tantara izay ampidirina ao anaty mpanoratra ilay toetra, mampahatsiahy ahy ny fotoana Roland ilay basy, namakivaky vavahady ary niditra an-tsokosoko tao anatin'ny olona iray avy amin'ny tontolo hafa Ilay mitam-basy, avy amin'ny andiany The Dark Tower nataon'i Stephen King. Tany ihany aho no nahatakatra tsara ary eto tsy dia fantatro izay zava-nitranga.
Avelako eto ity fizarana ity fa tsy amin'ny faran'ny toy ny mahazatra satria ny fizarana manaraka (Diso Fahatakarana) dia misy mpanimba.
Tena liana amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'izany aho fikarohana paleontolojika an'ny mpikaroka voajanahary voalohany any Amerika Avaratra.
Manontania ihany koa ny angano basilisk.
Ity fizarana farany ity dia mitondra mpikotrana. Tsy mamporisika ny hamaky azy io aho raha mbola tsy namaky ny sanganasa.
Raha naneho hevitra momba ilay andalana izay nidiran'ny Spider aho, dia niditra tao amin'ilay mahery fo i John Dunbar. Heveriko fa ny hevitra dia ny hampiseho mimicry anelanelan'ny endri-tsoratra, fomba iray hiampitana ny lalan'izy roa, mba hahitantsika ny fomba niafaran'ilay mahery fo ho Basilisk vaovao.
Saingy araka ny nolazaiko fa fiheverana izy ireo dia nanipy ahy kely tokoa.
Ny fanimbana ara-psikolojika ny toetra amam-panahy dia mitovy amin'ny an'i John Dunbar, na dia Dunbar, ny Basilisk aza, miaraka amina singa iray amin'ny herisetra ara-batana izay manodidina azy amin'ny fahafatesany, ny an'ny mpanoratra ny fanimbana anatiny manasaraka ny olona rehetra amin'ny tontolo iainany, basilisk sosialy .
Izany no mahatonga ahy toa ny toko ampifangaroan'ny Spider sy John Dunbar hamorona basilisk ao anatin'ny mpanoratra.
Tiako ihany koa ny fiafarany izay manome fanazavana bebe kokoa.
2 andinin-tsoratra masina